Mushure Mekumanikidza PSL Kudzikisa Mari, Vatsigiri Vodzoka Kuzoona Mitambo
Dynamos Fan 1
Vatsigiri vemutambo wenhabvu vakadzoka mudzinhandare nehuwandu hwavo mukupera kwesvondo mushure mekumboramwa memhaka yemubhadharo wepagedhe.
Vatsigri vemutambo uyu vakaita chipipiti kupinda mudzinhandare kunoona mitambo yenhabvu mushure mekunge VePremier Soccer League vadzikisa mari yepagedhe kusvika pamadhora matatu. PSL yakatanga yati vanhu vabhadhare madhora makumi maviri ikazodzikisa kusvika pamadhora gumi asi vatsigiri vange vachitsika madziro.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association VaJoseph Mutawi vanoti zvinofadza kuona veruzhinji vachitsigira nhabvu seizvi.
Vamwe vatsigiri vakanonoka kuuya kunhandare pamutambo weDynamos neFC Platinum vakadzoserwa kudzimba sezvo pachingobvumidzwa vatsigiri zviuru zviviri nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Mutambo weMugovera pakati peCranbourne Bullets neNgezi Platinum Stars wakakwezva vanhu zviuru zviviri sezvakatarwa nemitemo yeCovid 19.
Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu VaMatthias Kufandirimbwa vanove zvekare sabhuku wekwaChirumanzi vanoti vachitarisa hupfumi hwemunyika, madhora matatu ndiwo chaiwo anokodzera.
Asi vamwewo vari kuti madhora matatu azonyanya kuita mashoma veruzhinji vakabhadhara nemari yemuZimbabwe sezvakatarwa nebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Asi matambo wanezuro hauna kuzopera zvakanaka sezvo vatsigiri veDynamos vakapinda munhandare vachida kurova mubati wepembe VaBrighton Chimene vachivapomera mhosva yekukundikana kuita mutongi gava. Mapurisa akatozopindira kumisa mhirizhonga,
Vatsigiri vechikwata cheDynamos havana kufara nekurambwa kwechibodzwa chaAli Maliselo asi anenge ainge anwisa neruoko. Chibodzwa cheFC Paltinum chakanwiswa naInnocent Mucheneka.
FC Platinum yave kusangana neNgezi Platinum Stars mufainari. Ngezi yakasvika pachinhanho ichi mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. VePSL havasati vazivisa kuti fainari iyi ichatambirwa kupi uye rinhi.